Dagaal lagu qaaday saldhig ay ciidamada Soomaaliland ku leeyihiin Ceerigaabo -News and information about Somalia
Home Warkii Dagaal lagu qaaday saldhig ay ciidamada Soomaaliland ku leeyihiin Ceerigaabo
Dagaal lagu qaaday saldhig ay ciidamada Soomaaliland ku leeyihiin Ceerigaabo
Jabhadda uu hoggaamiyo Korneyl Caarre ayaa la sheegay in ay xalay weerar ku qaadeen saldhigga Ciidanka Booliska Somaliland ay ku leeyihiin magaaladaasi.
Weerarka oo xalay ka dhacay magaalada Ceerigaabo ayaa waxaa la sheegay in uu sababay khasaaro isugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay.
Ciidanka Somaliland ee ku sugnaa saldhigga ayaa la sheegayaa in ay iska caabin kala hortageen Jabhadda weerarka ku qaadday Saldhigga.
Ciidamada uu hoggaamiyo Korneyl Caarre ayaa waxaa ay dib ugu laabteen saldhig ay ku leeyihiin duleedka Magaalada Ceerigaabo.
Ilaa iyo hada lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi.
Ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay Maamulada Puntland iyo Soomaaliland.
Previous articlePuntland oo xabsiga dhigtay siyaasi caan ka ah Boosaaso
Next articleCiidamada xoogga oo xubno Al-Shabaab ah ku dilay Gedo.
Farmajo oo si qarsoodi ah qandaraas ku kacaya malaayiin u siisey...
XOG: Khilaafka Madaxda Villa Somalia oo sii Xoogeysanaya & doorashada oo...